Si kastaba ha noqotee, isbarbardhigga emaylka iyo kan bulsheed ayaa tufaax u ah liinta. Warbaahinta bulshada ayaa leh faa iidooyin badan oo intaa ka badan oo aan ka ahayn gujinta xayeysiiska iyo beddelashada. Warbaahinta bulshada ayaa aad looga cabsado helitaanka fariintaada. Marka aan u adeegsanno tusaalaha ku yaal bogga hoose. Waxaad u dirtaa emayl ilaa 1,000 ka mid ah macaamiishaada waxayna keeneysaa in 202 qof ay furaan emaylkaas 33 ka mid ahna ay gujinayaan.
Haatan aan wadaagno qoraalkaas baraha bulshada halkaasoo aad ku leedahay 1,000 qof oo raacsan labada Twitter iyo Facebook. Sida ku cad jaantuska, waxaa laga yaabaa in 10 qof ay dhab ahaan arkeen oo 3 guji. Taasi waxay u egtahay wax cabsi leh miyaanay ahayn?
Maya, maahan wax laga naxo. Waa tan sababta. Waxyaabaha aad ku dallacisay adoo adeegsanaya arrimaha bulshada waxaa wadaagay in yar oo ka mid ah dadkaas. Dadkaas tirada yar waxay leeyihiin in kabadan 20,000 oo taageerayaal ah. Kuwa raacsanna waxay gaarayaan in ka badan 100,000 oo raacsan. Kuwa raacana waxay gaarayaan malaayiin. Cidina ma furin emaylkaaga in ka badan hal jeer waana dhif iyo naadir in qofba dhab u diro e-maylka saaxiibkiis. Laakiin mawjadaha waxqabadka bulshada ayaa sii socday bilo.